LED မီးနှင့်အတူ RFID Keychain, LED Lights NTAG213 Chip Keychain, LED မီးနေရောင်ခြည် NFC ကို Keychain, RFID Key Fobs with LED Lights, RFID Key Ring with LED Lights, LED Lights Solar RFID Keychain, NFC Key Ring with Solar LED Lights, LED Lights Solar Smart RFID Keychain
LED မီးနှင့်အတူ RFID Keychain, LED မီးနေရောင်ခြည် NFC ကို Keychain
Keychain LED Lights NTAG213 Chip Keychain, LED မီးနေရောင်ခြည် NFC ကို Keychain, LED Lights Solar RFID Keychain, LED Lights Solar Smart RFID Keychain, NFC Key Ring with Solar LED Lights, NFC Keychain with LED Lights, RFID Key Fobs with LED Lights, RFID Key Ring with LED Lights, LED မီးနှင့်အတူ RFID Keychain, Smart Keychain with LED Lights
light source:3High-တောက်ပ၏တစ်သက်တာအတူမီးခွက် LED 100,000 နာရီ
ပစ္စည်း: ပစ္စည်းကို ABS + LED + နေရောင်ခြည် Panel ကို + ဘက်ထရီ
ပွောငျးလဲ: နောက်ကျောအပေါ် button ကို switch ကို
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 5.9 (ရှည်လျားသော) × 3.5(အကျယ်) × 1 (ထူသော) စင်တီမီတာ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 21 ဂရမ်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20~ + 65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဥတုအချိန်:2နာရီစဉ်ဆက်မပြတ်အလင်းရောင်အချိန်
အချိန်အားသွင်း:5နေရောင်ထဲမှာနာရီဖြည့်နိုင်ပါတယ်
The RFID keychain with LED lights isasolar rechargeable small flashlight developed by Seabreeze Smart Card Co.,Ltd, does not require battery replacement. The use of solar panels to convert light into electrical storage to the internal battery, with LED light tube, good light, withavery good lighting effect. အထုပ်3LED မီးလုံး, button on the back,asolar panel on the front, built-in RFID tags (ကြိမ်နှုန်းမြင့်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF, အနိမ့်အကြိမ်ရေ), NFC is the most. This LED smart keychain not only has an RFID keychain function, but also can give you illumination at night, very human design.
The surface can do simple screen printing, laser serial number, UID inner code, လိုဂို, ပုံစံ, စသည်တို့ကို, to meet the different needs of customers.
Widely used in residential apartment access control, staff attendance, တက်ရောက်သူတွေ့ဆုံ, music nightclub tickets, ကလပ်အဖွဲ့ဝင်စီမံခန့်ခွဲမှု, membership points consumption, တဦးတည်းကတ် Solutions, bus, bank, can also be used for small recharge.
I am interested in your product RFID Keychain with LED Lights, LED မီးနေရောင်ခြည် NFC ကို Keychain
prev: RFID သားရေ Key ကို Chain, RFID သားရေ Key ကို Ring ကို, RFID သားရေ Key ကို Fobs
နောက်တစ်ခု: TM အလိုအလျောက် Button ကိုသားရေ Key ကိုလက်စွပ်, iButton သားရေ Keychain, TM အလိုအလျောက်စမတ် Button ကို Keychain